Nge ukuvuvukala nezindlala wengane, noma, ukukhuluma ngokwesayensi, idlala, wonke umzali ebhekene nayo manje. Amalaka, ukuvuvukala, izimpawu - ukuqonda izindlela zokwelashwa yalesi sifo, kufanele uqale uqonde okushiwo imibandela eziyisisekelo.
On abaqaphi impilo yomuntu ngamunye amasosha omzimba iyingxenye ebalulekile okuyizinto nezindlala noma amalaka. Basuke eyakhiwa lymphoid futhi zitholakala emphinjeni, lapho bajoyine ngalo ingaphakathi ngomlomo kanye acinene.
Umsebenzi wawo oyinhloko - ukuvikela umzimba ekulweni izinhlobo ezahlukene "nsada". Bona ukuvimba endleleni futhi amagciwane namagciwane uzama ukunqoba amanzi, ukudla noma emoyeni. I nezindlala ukukhiqiza omzimba athile ukuthi ukulwa ne amagciwane abangela izifo. Ngaphandle amalaka banesibopho ukwakheka kanye nokugcina microflora evamile ngalo ingaphakathi ngomlomo. Ukuze khona umzimba amalaka wengane okunempilo kubalulekile ikakhulukazi, ngoba, ngaphezu ukuvikelwa umsebenzi oqondile, zihilelekile kumiswa amasosha omzimba.
Lapho abazali nakudzingeka ukuxilongwa "namathansela" akusiyo kucaca, okusho ukuthi yigama lezokwelapha. Umqondo "namathansela" kusho ukuvuvukala amalaka. Kungaba oyingozi noma ezingamahlalakhona. Ngokunciphisa amagciwane ukungatheleleki namagciwane ukuhlasela umzimba, buthelela phezu amalaka kanye nezilonda zabo. Kuleli zinga, abakwazi ukwenza umsebenzi walo zokuzivikela, kodwa kunalokho, ukumela ingozi emzimbeni.
Ifomu acute - kungcono amalaka, ukuvuvukala, izimpawu, ie ajwayelekile umphimbo obuhlungu enomkhuhlane zalo eziphakeme kanye umphimbo obuhlungu. Kodwa ngaphandle izimpawu zesifo, kufanele ucabange mayelana izinkinga ezingase ziphakame esikhathini esizayo. Ngokuhamba kwesikhathi, lezi yezinkinga kungathinta isimo izinso, inhliziyo nezihlanganiso. Kukhona izifo eziningi oluhlanganisa ngqo adluliselwe kanye namathansela. Ucwaningo lwamuva luye lwabonisa ukuthi kungase ngisho umsebenzi zokuzala kuze kuthinteke.
Lapho izikhalazo ingane nokuvutha umphimbo obuhlungu, ukucobeka, ahlole amygdala ngokushesha. Ukuze ekwelapheni ukuvuvukala we amalaka musa njalo badinga imithi elwa namagciwane, kodwa kuphela ezimweni ezimbi kakhulu. Uma kukhona ukuvuvukala amalaka, indlela ukwelapha lesi sifo, kufanele sitshele abantu imithi. Kufanele kukhunjulwe mayelana uphuza efudumele, ayegcwele vitamin C odingekayo ngosuku Kungaba izithelo iziphuzo ahlukahlukene, zezinkambi zasendle rose, itiye lemon noma amakhambi, nezivimbelakuvunda, ezifana peppermint, sage, camomile. Ungakhohlwa mayelana ephefumula ne amakhambi efanayo noma amafutha abalulekile. Idinga gargling njalo nge ezihlukahlukene ejenti isinqandakuvunda. Ungenza ku uqhoqhoqho amafutha ingane noma uviniga cindezela, kodwa kuphela uma kungekho imfiva. In the ukungabikho lokushisa eliphezulu ungakwazi ukulanda ashisayo unyawo okugeza ne lwesinaphi yoboya amasokisi ke efudumele.
Uma nezindlala zikhulile kakhulu futhi ihlanganisa enamathela ezimhlophe, kubalulekile ukubiza udokotela ngokushesha, ngoba ubomvu e amalaka kulokho okubizwa ngokuthi ubovu namathansela noma idiphtheria professional ungakwazi ukuxilonga kuphela nguchwepheshe. Kulo mBhalo kudinga esibhedlela esiphuthumayo kanye nokwelashwa ngemithi elwa namagciwane uxhumano. Lapho acute namathansela ingane esimisiwe embhedeni ukuphumula, amaningi isiphuzo okufudumele vitamin C odingekayo ngosuku sici esibalulekile esenza: angina - isifo esithathelanayo. Amalaka, ukuvuvukala, izimpawu kalula ngocansi ezinganeni ezisencane nasebekhulile. Ngakho-ke, isiguli kufanele isehlane, ukhawule oxhumana ngesikhathi ukugula kubalulekile ukunikeza izitsha ngabanye.
Esikhathini esidlule, ukwelapha angina esetshenziswa imithi elwa namagciwane penicillin akuzange kusize, kodwa okwamanje ngenxa kahle engezansi yokwelapha lezi izidakamizwa ezinganeni kanye nokuthuthukiswa komzimba nezinto odokotela babo ukuncoma Erythromycin, Azithromycin, Sumamed ezihlobene iqembu macrolide.
A nomphumela ezinhle i-hydrogen peroxide ukuhahaza (1 tablet ingilazi gidroperita cool abilisiwe amanzi). Kodwa eziphumelela kakhulu okwamanje lavage ka amalaka. izinqubo eziyishumi ukuqinisekisa egeza ngempumelelo ngaphandle ubomvu futhi zonke microflora pathogenic, isidleke amalaka. Uma lokhu ukuvuvukala isuswe, kusale ubovu kukakhokho, izinga lokushisa lehla futhi kuthuthukisa impilo.
imithi yesimanje alikukhuthazi ukususwa amalaka ngokungadingekile ngaphandle ezimweni ezikhethekile. Amalaka kubaluleke kakhulu impilo jikelele ingane, ikakhulukazi ngaphambi kweminyaka engu-12-13, lapho kukhona kumiswa amasosha omzimba. Ngaphezu kwalokho, ngaphezu umthwalo umzimba phakathi nokuhlinzwa, abakuqondanga ngokugcwele imiphumela yale ukuhlinzwa. Nge namathansela njalo nje badinga ukwelashwa izinga.
Kwanele ukuba banake, kanye namathansela ezingamahlalakhona. Uma nezindlala, ukuvuvukala, izimpawu zibonakala ngokucacile Ungazihluphi komntwana, akusho ukuthi akufanele aphathwe. Babhekisa omubi esingase sithinte ngayo isimo ukwehlisa amasosha omzimba, kodwa futhi kungathinta ikhono engqondo. Ngokushesha kubonakala ukukhathala, ingane kunzima ukufunda. Ngo namathansela ezingamahlalakhona kufanele kube Ukuhlolwa njalo nokuvimbela ukuxakeka. Lokhu kuyomane ukuqinisa amasosha omzimba.
Slicer Bosch Mas 6200: izithombe, incazelo, ukubuyekezwa